မွေးရာပါ လက်ချောင်းလေးတွေမရှိပေမဲ့ လက်ရေးလှပြိုင်ပွဲမှာ ပထမရရှိခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး . – Barnyar Barnyar
မွေးရာပါ လက်ချောင်းလေးတွေမရှိပေမဲ့ လက်ရေးလှပြိုင်ပွဲမှာ ပထမရရှိခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး .
မွေးရာပါ လက်ချောင်းလေးတွေမရှိပေမဲ့ လက်ရေးလှပြိုင်ပွဲမှာ ပထမရရှိခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
Frederick, Mary land မှာ နေထိုင်သူ ၁၀နှစ်အရွယ် Sara Hinesley လေးဟာ လက်ချောင်း လေးတွေ မရှိတဲ့ ကလေးမ လေးပါ။သူမဟာ လ က်ချောင်း လေးတွေ မပါပဲ မွေးဖွားခဲ့ ပင်မဲ့ သူမ ရဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့ သက်တမ်းကို အားမ လျော့တမ်းဖြတ်သန်း နေတဲ့ ကလေးမ လေးလို့ ပြောရင် ပိုမှန် ပါလိမ့်မယ်။
Zaner -Bloser National Hand writing Contest, တော့ သူမ အ နေနဲ့လုံးဝကို ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်မထား ရတဲ့ ဆုကိုသူမ ရရှိခဲ့ပါတယ်။Zaner- Bloser National Handwriting Contest, ဆိုတာ က မသန်စွမ်း ကလေးတွေ၊ မကြားနိုင်၊ မမြင်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေ (ဆွင့်အ နားမကြား) လေးတွေနဲ့ ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်း သူတွေသာ ပြိုင်ရတဲ့ ပွဲလေးပါ ။
ဒီပွဲလေးကို နှစ်စဉ်ကျင်းပ ပေးလေ့ရှိပြီး ဒီ နှစ်မှာ တော့ လက်မရှိတဲ့ သူမဟာ လက်ရှိတဲ့ သူတွေထက်ပိုပြီး လက်ရေး လှတာ ကြောင့် ပထမ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ဘယ်လိုတောင် ဘဝကို မ လျော့တမ်း တိုက်ခိုက်ရဲတဲ့ ကလေးမ လေးလဲသိပ်ကို လေးစားဖို့ ကောင်းပါ တယ်နော်။
မွေးရာပါ လက်ချောင်းလေးတွေမရှိ သော်လည်း လက်ရေးလှ ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမရရှိခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးFrederick, Mary land မှာ နေထိုင်သူ ၁၀နှစ်အရွယ် Sara Hinesley လေးဟာ လက်ချောင်း လေးတွေ မရှိတဲ့ ကလေးမ လေးပါ။
သူမဟာ လ က်ချောင်း လေးတွေ မပါပဲ မွေးဖွားခဲ့ ပင်မဲ့ သူမ ရဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့ သက်တမ်းကို အားမ လျော့တမ်းဖြတ်သန်း နေတဲ့ ကလေးမ လေးလို့ ပြောရင် ပိုမှန် ပါလိမ့်မယ်။Zaner -Bloser National Hand writing Contest, တော့ သူမ အ နေနဲ့လုံးဝကို ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်မထား ရတဲ့ ဆုကိုသူမ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Zaner- Bloser National Handwriting Contest, ဆိုတာ က မသန်စွမ်း ကလေးတွေ၊ မကြားနိုင်၊ မမြင်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေ (ဆွင့်အ နားမကြား) လေးတွေနဲ့ ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်း သူတွေသာ ပြိုင်ရတဲ့ ပွဲလေးပါ ။
ဒီပွဲလေးကို နှစ်စဉ်ကျင်းပ ပေးလေ့ရှိပြီး ဒီ နှစ်မှာ တော့ လက်မရှိတဲ့ သူမဟာ လက်ရှိတဲ့ သူတွေထက်ပိုပြီး လက်ရေး လှတာ ကြောင့် Winner ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ဘယ်လိုတွေတောင် ဘဝကို အားမလျော့တမ်း တိုက်ခိုက်ရဲတဲ့ ကလေးမလေးလဲ…သိပ်ကို လေးစားဖို့ ကောင်းပါ တယ်နော်…။
မှေးရာပါ လကျခြောငျးလေးတှမေရှိပမေဲ့ လကျရေးလှပွိုငျပှဲမှာ ပထမရရှိခဲ့တဲ့ ကောငျမလေး
Frederick, Mary land မှာ နထေိုငျသူ ၁၀နှဈအရှယျ Sara Hinesley လေးဟာ လကျခြောငျး လေးတှေ မရှိတဲ့ ကလေးမ လေးပါ။သူမဟာ လ ကျခြောငျး လေးတှေ မပါပဲ မှေးဖှားခဲ့ ပငျမဲ့ သူမ ရဲ့ကနျြရှိနတေဲ့ သကျတမျးကို အားမ လြော့တမျးဖွတျသနျး နတေဲ့ ကလေးမ လေးလို့ ပွောရငျ ပိုမှနျ ပါလိမျ့မယျ။
Zaner -Bloser National Hand writing Contest, တော့ သူမ အ နနေဲ့လုံးဝကို ဖွဈနိုငျမယျလို့ ထငျမထား ရတဲ့ ဆုကိုသူမ ရရှိခဲ့ပါတယျ။Zaner- Bloser National Handwriting Contest, ဆိုတာ က မသနျစှမျး ကလေးတှေ၊ မကွားနိုငျ၊ မမွငျနိုငျတဲ့ ကလေးတှေ (ဆှငျ့အ နားမကွား) လေးတှနေဲ့ ကိုယျလကျအင်ျဂါခြို့ယှငျး သူတှသော ပွိုငျရတဲ့ ပှဲလေးပါ ။
ဒီပှဲလေးကို နှဈစဉျကငျြးပ ပေးလရှေိ့ပွီး ဒီ နှဈမှာ တော့ လကျမရှိတဲ့ သူမဟာ လကျရှိတဲ့ သူတှထေကျပိုပွီး လကျရေး လှတာ ကွောငျ့ ပထမ ဖွဈခဲ့ ပါတယျ။ဘယျလိုတောငျ ဘဝကို မ လြော့တမျး တိုကျခိုကျရဲတဲ့ ကလေးမ လေးလဲသိပျကို လေးစားဖို့ ကောငျးပါ တယျနျော။
မှေးရာပါ လကျခြောငျးလေးတှမေရှိ သျောလညျး လကျရေးလှ ပွိုငျပှဲမှာ ပထမရရှိခဲ့တဲ့ ကောငျမလေးFrederick, Mary land မှာ နထေိုငျသူ ၁၀နှဈအရှယျ Sara Hinesley လေးဟာ လကျခြောငျး လေးတှေ မရှိတဲ့ ကလေးမ လေးပါ။
သူမဟာ လ ကျခြောငျး လေးတှေ မပါပဲ မှေးဖှားခဲ့ ပငျမဲ့ သူမ ရဲ့ကနျြရှိနတေဲ့ သကျတမျးကို အားမ လြော့တမျးဖွတျသနျး နတေဲ့ ကလေးမ လေးလို့ ပွောရငျ ပိုမှနျ ပါလိမျ့မယျ။Zaner -Bloser National Hand writing Contest, တော့ သူမ အ နနေဲ့လုံးဝကို ဖွဈနိုငျမယျလို့ ထငျမထား ရတဲ့ ဆုကိုသူမ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
Zaner- Bloser National Handwriting Contest, ဆိုတာ က မသနျစှမျး ကလေးတှေ၊ မကွားနိုငျ၊ မမွငျနိုငျတဲ့ ကလေးတှေ (ဆှငျ့အ နားမကွား) လေးတှနေဲ့ ကိုယျလကျအင်ျဂါခြို့ယှငျး သူတှသော ပွိုငျရတဲ့ ပှဲလေးပါ ။
ဒီပှဲလေးကို နှဈစဉျကငျြးပ ပေးလရှေိ့ပွီး ဒီ နှဈမှာ တော့ လကျမရှိတဲ့ သူမဟာ လကျရှိတဲ့ သူတှထေကျပိုပွီး လကျရေး လှတာ ကွောငျ့ Winner ဖွဈခဲ့ ပါတယျ။ဘယျလိုတှတေောငျ ဘဝကို အားမလြော့တမျး တိုကျခိုကျရဲတဲ့ ကလေးမလေးလဲ…သိပျကို လေးစားဖို့ ကောငျးပါ တယျနျော…။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေလို့ ခင်ပွန်းကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ရှာပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးသည်(သူများတွေများချစ်တတ်လိုက်တာ) ..
သူငယျခငျြးဖွဈသူ ရမှေနျနဲ့ပတျသကျပွီး ရငျတှငျးခံစားခကျြတခြို့ကို ရေးသားလာတဲ့ .အဆိုတျော ကြားပေါကျ..